သန်းကြွယ်သူဌေးတွေဆီကနေရတဲ့ သူဌေးဖြစ်နည်း ၄ နည်း
28 Mar 2018 . 12:59 PM
“Rich Habits ၊ Rich Kids ၊ Change Your Habits Change Your Life ၊ Rich Habits Poor Habits”စတဲ့နာမည်ကြီးစာအုပ်တွေရေးသားသူ Thomas C. Corley ကRich Habit Study ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ၅ နှစ်ကြာအချိန်ပေးပြီး မီလျံနာပေါင်း ၂၃၃ ယောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်မှာတော့ သူတို့တွေပြောတဲ့ တူညီတဲ့အချက် ၄ ချက်ကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ ၄ ချက်ဟာ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအတွက် ပဓာနကျတဲ့အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေပါပဲ။ ဒီတော့ အောင်မြင်ခြင်းအတွက်နည်းနာပေါင်းများစွာကို လိုက်မကျင့်ကြံချင်ရင်တောင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီ ၄ ချက်ကိုတော့ မပစ်ပယ်သင့်တာမို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နယ်ပယ်တစ်ခုမှာကိုယ်ကအရမ်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာတဲ့အခါ ထိပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် လူတွေကငွေကြေးအများကြီးပေးလာကြမှာပါ။ ဒီလိုနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာဖို့အတွက် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သွားရမယ့်အချက်တွေနဲ့ စိုက်ထုတ်ရမယ့်ခွန်အားတွေ ရှိပါတယ်။
၁) စာဖတ်ခြင်း – ကိုယ်ကျင်လည်ရာနယ်ပယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို နေ့စဉ်ဖတ်ရပါမယ်။ ကိုယ်ကျင်လည်တဲ့ Field အတွက်နေ့စဉ်ဗဟုသုတစုဆောင်းပါ။ ကိုယ့်အသက်မွေးနေတဲ့ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါး၊ စာအုပ်တွေ နေ့စဉ်ဖတ်ပါ။
၂) လေ့ကျင့်ခြင်း – နည်းပညာတစ်ခုခုကို ကိုယ်ကအသုံးချနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီနည်းပညာရပ်မှာကဝေတစ်ပါးဖြစ်အောင် ထုံးလိုမွှေရေလိုနှောက်ဖြစ်နေရပါမယ်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအသုံးချတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လမ်းကြောင်းမျိုးစုံကနေကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။
၃) Facts တွေကိုလေ့လာခြင်း – လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ရောက်လေရာရာ လျှောက်ဖတ်နေတာထက် ကိုယ်လေ့လာမယ့် Topic ကိုသေသေချာချာရွေးထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Topic ရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတကယ်နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ ငါလေ့လာနေတာပဲလေဆိုပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာဘာမှမကျန်ခဲ့တာမျိုး ခဏလေးနဲ့မေ့ပျောက်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေရပါဘူး။
ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့ ၈၀% ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကို သုံးလိုက်ရင်တော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဘယ်တော့မှတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စုလည်းစု သုံးလည်းသုံးတတ်ရပါမယ်။
၃) စုဆောင်းပါ၊ ရင်းနှီးပါ
ကိုယ့်ဝင်ငွေများရင်များလာသလို စုဆောင်းတဲ့ငွေအချိုးကလည်း တိုးလာရပါမယ်။ ငွေကြေးကို အရင်စုဆောင်းပါ။ ပြီးရင်တော့ သေချာတဲ့အလုပ် ကိုယ်လည်းနားလည်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ငွေကိုတိုးပွားအောင် အသုံးမချတတ်ရင်တော့ သူဌေးဖြစ်ဖို့နှေးနေနိုင်ပါတယ်။
၄) ငွေရပေါက်ရလမ်းများစွာ ဖန်တီးထားပါ
ငွေစီးဆင်းလာရာ လမ်းကြောင်းကိုဘယ်တော့မှ တစ်ခုတည်းမထားရပါဘူး။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်ကိုအသုံးချ အခြားနယ်ပယ်နဲ့ Link ချိတ်ပြီး ငွေရှာတတ်ရပါမယ်။ ငွေရပေါက်ရလမ်းတွေများများတည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး လက်တံများများဖြန့်ထားနိုင်ပါမှ ငွေကြေး အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် မယိုင်မလဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့မီလျံနာတွေတိုင်းဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှာသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာမျိုးမရှိဘဲ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများစွာကိုဖန်တီးထားတတ်ကြတာတွေ့ရမှာပါ။
မီလျံနာမဖြစ်ရင်တောင် ဘဝမှာနေနိုင်စားနိုင်ပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလေးချက်ဟာအရေးအပါဆုံးဖြစ်တာမို့ အခုကနေစပြီး အားလုံးအတူတူကြိုးစားကြပါစို့။
သနျးကွှယျသူဌေးတှဆေီကနရေတဲ့ သူဌေးဖွဈနညျး ၄ နညျး
“Rich Habits ၊ Rich Kids ၊ Change Your Habits Change Your Life ၊ Rich Habits Poor Habits”စတဲ့နာမညျကွီးစာအုပျတှရေေးသားသူ Thomas C. Corley ကRich Habit Study ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျအောကျမှာ ၅ နှဈကွာအခြိနျပေးပွီး မီလြံနာပေါငျး ၂၃၃ ယောကျတှဆေုံ့မေးမွနျးလလေ့ာခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးအနှဈခြုပျမှာတော့ သူတို့တှပွေောတဲ့ တူညီတဲ့အခကျြ ၄ ခကျြကိုသိရှိခဲ့ရပါတယျ။ ဒီ ၄ ခကျြဟာ အောငျမွငျခွငျးနဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝခွငျးအတှကျ ပဓာနကတြဲ့အရေးအကွီးဆုံး အခကျြတှပေါပဲ။ ဒီတော့ အောငျမွငျခွငျးအတှကျနညျးနာပေါငျးမြားစှာကို လိုကျမကငျြ့ကွံခငျြရငျတောငျ အခွခေံအကဆြုံးဖွဈတဲ့ ဒီ ၄ ခကျြကိုတော့ မပဈပယျသငျ့တာမို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
နယျပယျတဈခုမှာကိုယျကအရမျးကြှမျးကငျြသူဖွဈလာတဲ့အခါ ထိပျဆုံးရောကျလာတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့ပညာနဲ့ကြှမျးကငျြမှုအတှကျ လူတှကေငှကွေေးအမြားကွီးပေးလာကွမှာပါ။ ဒီလိုနယျပယျတဈခုမှာ ဆရာတဈဆူဖွဈလာဖို့အတှကျ နစေ့ဉျလုပျဆောငျသှားရမယျ့အခကျြတှနေဲ့ စိုကျထုတျရမယျ့ခှနျအားတှေ ရှိပါတယျ။
၁) စာဖတျခွငျး – ကိုယျကငျြလညျရာနယျပယျအလိုကျ သကျဆိုငျရာစာအုပျတှကေို နစေ့ဉျဖတျရပါမယျ။ ကိုယျကငျြလညျတဲ့ Field အတှကျနစေ့ဉျဗဟုသုတစုဆောငျးပါ။ ကိုယျ့အသကျမှေးနတေဲ့ပညာရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဆောငျးပါး၊ စာအုပျတှေ နစေ့ဉျဖတျပါ။
၂) လကေ့ငျြ့ခွငျး – နညျးပညာတဈခုခုကို ကိုယျကအသုံးခနြတေယျဆိုပါစို့။ ဒီနညျးပညာရပျမှာကဝတေဈပါးဖွဈအောငျ ထုံးလိုမှရေလေိုနှောကျဖွဈနရေပါမယျ။ လမျးကွောငျးတဈခုတညျးအသုံးခတြတျတာမြိုးမဟုတျဘဲ လမျးကွောငျးမြိုးစုံကနကြှေမျးကငျြအောငျလကေ့ငျြ့ထားရပါမယျ။
၃) Facts တှကေိုလလေ့ာခွငျး – လလေ့ာတယျဆိုတဲ့နရောမှာ တဈနတေ့ဈနရေ့ောကျလရောရာ လြှောကျဖတျနတောထကျ ကိုယျလလေ့ာမယျ့ Topic ကိုသသေခြောခြာရှေးထားဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ Topic ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုတကယျနားလညျအောငျ ကွိုးစားပါ။ ငါလလေ့ာနတောပဲလဆေိုပမေယျ့ ခေါငျးထဲမှာဘာမှမကနျြခဲ့တာမြိုး ခဏလေးနဲ့မပြေ့ောကျသှားတာမြိုး မဖွဈစရေပါဘူး။
ကိုယျ့ဝငျငှရေဲ့ ၈၀% ဒါမှမဟုတျ အားလုံးကို သုံးလိုကျရငျတော့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုကိုဘယျတော့မှတညျဆောကျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ စုလညျးစု သုံးလညျးသုံးတတျရပါမယျ။
၃) စုဆောငျးပါ၊ ရငျးနှီးပါ
ကိုယျ့ဝငျငှမြေားရငျမြားလာသလို စုဆောငျးတဲ့ငှအေခြိုးကလညျး တိုးလာရပါမယျ။ ငှကွေေးကို အရငျစုဆောငျးပါ။ ပွီးရငျတော့ သခြောတဲ့အလုပျ ကိုယျလညျးနားလညျနတေဲ့ အလုပျတဈခုမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။ ငှကေိုတိုးပှားအောငျ အသုံးမခတြတျရငျတော့ သူဌေးဖွဈဖို့နှေးနနေိုငျပါတယျ။
၄) ငှရေပေါကျရလမျးမြားစှာ ဖနျတီးထားပါ
ငှစေီးဆငျးလာရာ လမျးကွောငျးကိုဘယျတော့မှ တဈခုတညျးမထားရပါဘူး။ ကိုယျကြှမျးကငျြရာ နယျပယျကိုအသုံးခြ အခွားနယျပယျနဲ့ Link ခြိတျပွီး ငှရှောတတျရပါမယျ။ ငှရေပေါကျရလမျးတှမြေားမြားတညျဆောကျထားနိုငျပွီး လကျတံမြားမြားဖွနျ့ထားနိုငျပါမှ ငှကွေေး အလုပျနဲ့ပတျသကျရငျ မယိုငျမလဲရှိနမှောဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျနတေဲ့မီလြံနာတှတေိုငျးဟာ လုပျငနျးတဈခုတညျးမှာသာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားတာမြိုးမရှိဘဲ ငှကွေေးစီးဆငျးမှုလမျးကွောငျးမြားစှာကိုဖနျတီးထားတတျကွတာတှရေ့မှာပါ။
မီလြံနာမဖွဈရငျတောငျ ဘဝမှာနနေိုငျစားနိုငျပြျောရှငျနိုငျတဲ့အနအေထားတဈခုကို လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလေးခကျြဟာအရေးအပါဆုံးဖွဈတာမို့ အခုကနစေပွီး အားလုံးအတူတူကွိုးစားကွပါစို့။
KTV မှာ ကြုံနေကျ ကိုယ်တွေ့အနှောက်ဇာတ်လမ်းလေးများ စုစည်းမှု
အသက်ကြီးမှ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို လေ့လာနိုင်လား
Leonardo နဲ့ Brad Pitt တို့ကို အတူတွဲတွေ့မြင်ရမယ့် ‘Once UponaTime in Hollywood’
ပျော်တတ်ကြတဲ့ “Fun Band” ညီအစ်မနှစ်ဦးရဲ့ အနုပညာခရီး
by Moethae Say .7hours ago
ချစ်သူကိုချစ်သလို မိဘတွေကိုလည်းချစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသပါ
by Naw Hsel Hte .9hours ago